“ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းအဆိုတော် အုပ်စု၏လက်ချက်ဖြင့် ပျက်ဆီးသွားသော မန္တလေးမြို. အပျက်အစီးများမှာ” (CJ သတင်း) | Burma Muslim
“ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းအဆိုတော် အုပ်စု၏လက်ချက်ဖြင့် ပျက်ဆီးသွားသော မန္တလေးမြို. အပျက်အစီးများမှာ” (CJ သတင်း)
By burmamuslim on July 2, 2014	ဇူလိုင် ၂ ၊ ၂၀၁၄
၂၆ ဘီလမ်း ဆိုင်းတန်းရုပ်ရှင်အနီးရှိ ရော့ကတ် ကုန်မာဆိုင်ရှေ.မှ ကားအဖြူရောင်အားမီးရှို့ခံရ ပြီး ရှေ့ခေါင်းပိုင်းလောင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဆိုင်ကိုလည်း ကျောက်ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်သဖြင့် မှန်များကွဲ၊၂၆ လမ်းပေါ်ရှိ ရွှေတစ်ချောင်း အနောက်ဘက်ရှိ မွန်းစတား ကုန်မာဆိုင်နှင့်တက်စိန် တရုပ်အပေါင်ဆိုင် ကိုလည်း ခဲများဖြင့်ပစ်ထားပြီး မှန်များကွဲသွားကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါအပြင် ၂၅ လမ်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သွတ်ပြားဆိုင်များ၏ ဆိုင်းဘုတ်များကိုလည်း ခဲဖြင့်ထုခွဲထားပြီး ၊၈၃လမ်း-၂၆ဘီလမ်းထောင့်ရှိ ဗဟိုပိုက်ဆိုင်၊ ၂၆လမ်း ၈၂.၈၃ ကြားရှိ ယခင် မင်း ကွန်ပြူတာယခု HTC ဖုန်းအရောင်းပြခန်းဆိုင်လည်း ခဲဖြင့်ထုခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၆ လမ်းကျုံးထောင့်ရှိ ဗဟိုဗလီရှေ.တွင် ခဲပုံတွေ့သော်လည်း ပျက်ဆီးမှုမတွေ.ရပါ။ ( လမ်းပေါ်မှသာကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊သို့သော် ည ကကြားရသောသတင်းအရ ဗဟိုဗလီအောက်ရှိ ရေသန့်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် ကိုလည်း ခဲနဲ့ထုခံရဟုသိရပြီး တံခါးပိတ်ထားသဖြင့် မမြင်ခဲ့ရပါ)။
၂၆ ဘီလမ်း တစ်လျှောက် ကျုံးဘေးမှ မန်းသီရိဈေးအထိ ရဲတပ်ဖွဲ.မှအပြာရောင် မီးသတ်ကားများအပါအဝင် M-16 မောင်းပြန်များကိုင်ဆောင်သောရဲ လုံထိန်းများ နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ.များ အများအပြားချထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာတဝိုက်လမ်းများအား တစ်ပြ ပတ်လည် ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။
သေနတ်လေးချက် ပစ်ဖောက်ခဲ့သော ကျွန်တော်နေရာ ရပ်ကွက်တွင်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးယူထားပြီး ဘဏ် ၂နှင့် ၃ နေရာတွင် တွင်ချထားပါတယ်။
သေနတ်လေးချက်ပစ်ဖောက်သဖြင့် ၂ ဦးဒဏ်ရာရပြီး တစ်ဦးကိုဆေးရုံကြီးသို့တင်ပို့ကုသပြီး နားရွက်ဘေးရှပ်ထိသဖြင့် အသက် အန္တရယ် မစိုးရီမ်ရပါ။
မန္တလေး ဈေးချို ၂၆ ဘီလမ်းဘက်မှာလည်း မသင်္ကာ စရာတွေ.လို့ဆိုပြီး စစ်တပ်က မိုင်းရှင်းလင်းရေး အဖွဲ.တွေလာတာလည်း မနက် ၉း၃၀ လောက်ကတွေ.လိုက်တယ်။
မှတ်ချက်** ယနေ့ မနက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး မျက်မြင်တွေ့ရှိချက်များဖြစ်ပါသည်။ အပျက်အဆီးဒဏ်ရာရ စာရင်း ဒီထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။